Ajaja SQL sududaan kaasisa
Haalata dhaloota SQL keessatti ajaja SQL LibreOfficen hin hiikamne galchuu dandeessa, garuu sanirra sududaan gara kuusaa deetaa dabra. Yoo jijjiiramoota mul'annoo wixinee kana hin mul'isne, gara mul'annoo wixinetti deebinee jijjiiruu dandeessu.
SQL jiraataaf, diraan SQL sududaan gara sirna kuusaa deetaa koronyatetti madaallii duraanii malee LibreOffice tti darba. Fakkeenyaa, yoo kuusaa deetaa walqunnamaa ODBC keessa darbutti fayyadamte, diraan SQL gara ooftuu ODBC darba akkasumas isaan geggeeffama.
Haalata baratamoo, jijjiirraan Wixinee Galfata Haaraa keessatti jijjiirraa hayyamamaa SQL keessa dabru walsimsiifametti deebi'uuf sajoo deebi'ii cuqaasi.
Title is: Ajaja SQL sududaan kaasisa